Yandex inotonga: isina kuiswa chikafu kuendesa muMoscow | TeraNews.net
Yandex inotonga: isina kuiswa chikafu kuendesa muMoscow
Munyori Kravetz Pavel Yakabudiswa pa 09.12.2020
Nepo vatungamiriri vesainzi ngano mafirimu vasingakwanise kusarudza munzira ipi neipi yekuendesa chikafu kune vatengi, Yandex akaenderera mberi nekuita. Rangarira iyo bhaisikopo "Yechishanu Element", uko hunhu hukuru hwakaendeswa chikafu pachikepe chinobhururuka? Nditende, munguva pfupi inotevera tichakwanisa kuita zvakafanana.
Kuendesa chisina chikafu muMoscow
Zvinonzwika, hongu, zvisina musoro - kuendesa chisina chikafu muMoscow. MaAmerican nemaEuropean vanofungidzira Russia nemapere achifamba mumigwagwa. Uyezve chikafu chisina kurongwa muMoscow, uye kunyangwe kubva kune imwe mhando yeYandex. Majee apera. MaRussia akabata chirongwa ichi mukuvandudza matekinoroji eIT mumaoko avo.
Kunyange zvese zvichitaridzika kunyorova. Imotokari isina kumisikidzwa saizi yemota yeredhiyo inotyairwa neAI mumigwagwa yeguta. Iko kune zvakare mukana wekuseka iye musiki - muchina hauzive kutora mac curbs. Uye iyo yekuvhara haina kusimba. Asi chirongwa ichi chiri kutoyedza mashandiro echavimbiswa chikafu chekuendesa kumutengi. Kununurwa kwechikafu chisina kurongwa muMoscow idanho rekutanga. Munzvimbo dzekudyidzana, mashandiro ekuendesa maodha nemhepo ari kutokurukurwa mune zvakakomba zvese.
Pane chivimbo chakazara chekuti 2021 ichave shanduko yeRussia. Nyika, iyo makore mashanu apfuura yaionekwa sechisaririra chekare, nenzira inoshamisa yakasimuka kubva mumadota. Zviratidzo zvepasirese zvakanakisa zvekugadzira, IT matekinoroji, zvekushandisa muchiuto nemishonga Kunyangwe isina kuiswa chikafu chikafu chiri trite, asi zvakadaro Russia iri pamberi. Kunge setiraiti yekutanga yekugadzira, murume ari muchadenga, nezvimwe.